Tsvangirai Faction Of Zimbabwe Opposition Promotes Former Rival
The faction of Zimbabwe's Movement for Democratic Change led by founder Morgan Tsvangirai said Monday that Gift Chimanikire, member of parliament for the Mbare section of Harare, has been elected to the faction's national executive council.
Chimanikire, who had been relegated to the status of ordinary party member after a brief defection to the rival faction headed by Arthur Mutambara faction, had served as MDC deputy secretary general before the main opposition party splintered.
Glen View parliamentarian Paul Madzore and Gweru Mayor Sessel Zvidzayi were also elected into the parliamentary caucus of the party's top decision-making body.
Chaminkire told reporter Patience Rusere of VOA's Studio 7 for Zimbabwe he intends to participate in party politics at even higher levels.
Meanwhile, members of the Tsvangirai faction in the United States said they will keep drawing attention to Zimbabwe's political, economic and human rights crisis. A number of Tsvangirai faction members traveled from Ohio to Washington late last week to demonstrate at the White House and the Zimbabwean Embassy there.
Activist Zvidzai Ruzvidzo told reporter Carole Gombakomba that he was impressed by the level of engagement by Zimbabweans in Ohio and other U.S. locations.